पर्यटकबाट आउने रकमभन्दा नेपालबाट विदेशिने रकम बढी, वार्षिक ७३ अर्ब आय हुँदा ८९ अर्ब व्यय
भदौ १५, काठमाडौं । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले वार्षिक रुपमा नेपालमा खर्च गर्ने रकमभन्दा नेपालबाट विदेशिने रकम बढी हुने गरेको देखिएको छ । आइतवार प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू. ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये शिक्षातर्फको खर्च मात्रै रू. ४६ अर्ब ३२ करोड रहेको छ ।
जबकी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय रू. ८९ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । यसले आयको तुलनामा व्यय रकम १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको देखाएको छ । यो आव २०७४/७५ मा भन्दा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय रू. ७९ अर्ब ६० करोड रहेको थियो ।
नेपालमा विदेशी पर्यटकले गर्ने गर्ने यस्तो खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । विदेशीले गर्ने खर्च आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बढेपनि वृद्धिदर भने खुम्चिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो वर्ष आयको वृद्धिदर १४ प्रतिशत थियो । यद्यपि गएका ३ वर्षमा पर्यटक आगमनसँगै उनीहरुले गर्ने खर्च पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू. ५८ अर्ब आम्दानी गरेको नेपालले २०७४/७५ मा रू. ६७ अर्ब आम्दानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पर्यटक आगमनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ लाख ३८ हजार ५८९ पुगेको छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । अध्यागमन विभागकाअनुसार सन् २०१८ मा कुल ११ लाख ७३ हजार ७२ पर्यटक नेपाल आएका थिए । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुनसम्म ५ लाख ८५ हजार ५३१ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
दुईदिने भ्रमण सकेर भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला स्वदेश फिर्ता[२०७७ मंसिर, १४]
दुईदिने भ्रमण सकेर भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला स्वदेश फिर्ता
रुग्णको अध्ययन नै किन ?
खाजामा अब फर्सी र सूर्यमुखीको बियाँ